को हुन एमाले उपाध्यक्ष पहिलो महिला रेस्लर खड्का ? – Janata Times
को हुन एमाले उपाध्यक्ष पहिलो महिला रेस्लर खड्का ?
नेकपा एमालेको नाममा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेसँगै उपाध्यक्षमा भगवति खड्का युनिकाको नाम रहेको छ । खड्काको नाम भने परिचित नै हो, खासगरी खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि । उहाँले केही टेलिश्रृंखलामा अभिनय, फिल्ममा समेत अभिनय गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली टेलिश्रृंखला भुन्टीमा समेत अभिनय गर्नुभएको छ ।
खासमा राजनीति मन नपराउने खड्का हाल उपाध्यक्ष हुनुभएको हो । खड्का चर्चित एवं नेपालको पहिलो महिला रेस्लर समेत हुनुहुन्छ । उहाँ रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं अनामनगरमा बस्नुहुन्छ । उहाँले नेपालमा धेरै पटक महिला रेस्लिङको आयोजना समेत गरिसक्नुभएको छ । उहाँ विभिन्न सामाजिक काममा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ ।
असार १२ गते धनुषाका मनिषकुमार उपाध्यायले आफू महासचिव रहेको जानकारीसहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएसँगै उहाँ उपाध्यक्षमा रहनुभएको हो । एमाले अध्यक्षमा सन्ध्या तिवारी रहनुभएको छ । जस्को कार्यसमिति २४ सदस्यीय रहेको छ । तिवारी मोरङ निवासी रहेको नागरिकताले खुलाएको छ ।
Related tags : को हुन एमाले उपाध्यक्ष पहिलो महिला रेस्लर खड्का ?
सत्यकै जीत हुनेछ नेकपा ‘युद्ध’मा
कोभिड अपडेट– थपिए ४८२ संक्रमित, संख्या पुग्यो १४ हजार ४६
मेट्रोले हटायो सादा पोशाकका २५ घुमुवा प्रहरी
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको बढ्यो सक्रियता
डायलाइसिसपछि निवास फर्कनुभयो प्रधानमन्त्री ओली